पाठेघर खस्यो भन्दा भन्दै फुलमायालाई क्यानसर भयो, पैसा नहुँदा उपचारमा समस्या - Pradesh Dainik
शुक्रबार, भदौ ०४, २०७८ , प्रदेश दैनिक
फुलमाया मगरको सरिरमा तागत हुन्जेल छर छिमेक सबैतिर काम गरिन् । छिमेकमा बनिबुतो गर्ने मात्रै हैन् मिस्त्रीहरुसंग घर तथा अन्य निर्माण क्षेत्रमा ढुङ्गा बोक्ने सम्मको मज्दुरी गरिन् । अहिले पाठेघरमा क्यानसर भएपछि घरको आँगन पनि फुलमायाका लागि टाढा भएको छ ।
मोरङ पथरी शनिश्चरे २ नवज्योती टोलमा फुलमायाको एउटा सानो घर छ । वनको छेवैमा खालि जग्गा रहेको थियो । सो जग्गा पनि माइतीका दाजुहरुले उपभोग गरिरहेका थिए तर गाउँलेहरुसंगको सल्लाहमा दाजु भाइहरुले फुलमायालाई घर बनाएर बस्न दिएका छन् । श्रीमान्संग सम्बन्ध बिच्छेद भएपनि २०५० सालदेखि आफैँ श्रम गरेर छोराहरु हुर्काएको फुलमाया बताउछिन् ।
करिब १ वर्षअघि बिरामी भएपछि अस्पताल धाउन थालेकी फुलमायालाई गत साउनमा नोवेल अस्पताल बिराटनगरले पाठेघरमा क्यानसर भएको बतायो । कहिले मृगौलामा पथरी त कहिले पाठेघरमा समस्या भएको भन्दै औषधी सेवन गरिरहेकी फुलमायाको पाठेघर खस्यो । पाठेघर खसेपछि पिसाव समेत मलद्वारबाट जान थालेको फुलमायाले बताइन् । क्यानसर भएको पत्ता लगाउन नै फुलमायाले ४० हजार सकिन् । त्यो रकम पनि सामुदायिक वन र छिमेकीहरुले सहयोग गरेका थिए । अब उपचारका लागि भरतपुर क्यानसर अस्पताल जान रकम अभाव भएपछि फुलमाया जीवन मरणको दोसाँधमा छिन् । वडा कार्यालय, नगरपालिका, सामुदायिक वन र छिमेकीहरुले आर्थिक सहयोग गरेर फुलमायाको उपचार गर्ने बताइरहेका छन् ।
फुलमायाका २ भाइ छोराहरु पनि मज्दुरी गरेर परिवारको जिविको पार्जन गरिरहेका छन् । आमाको उपचारका लागि रकम संकलन भए तत्काल उपचार गर्न लाने छोरा दिनेश पुलामी मगरले बताए । देश तथा विदेशमा रहनुहुने सबै मनकारीहरुले सकेको सहयोग गरेर आफ्नो उपचार गरिदिन फुलमायाले अनुरोध गरेकी छन् । फुलमायाको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग संकलन गर्न नवज्योती टोल बिकास समिति अध्यक्ष खेमराज न्यौपानेको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन भएको छ । सहयोग गर्न चाहनेहरुले फुलमायाका छोरा दिनेश पुलामीको शिद्धार्थ बैंक पथरी शाखामा रहेको खाता नं. ००७१८३००९४० मा सहयोग पठाउन सकिने समितिले जनाएको छ । सम्पर्क गर्नुपरेमा समितिका संयोजक न्यौपानेको फोन नं. ९८०७३१३१३४ मा गर्न सकिने जनकारी दिइएको छ ।